Igbe ịtụnanya maka ụbọchị Valentine | Ọrụ On
Igbe ịtụnanya maka ụbọchị Valentine
Alicia tomero | | Crafts, Ọrụ katọn, Crafts maka inepo Day
Ụdị igbe ndị a dị nnọọ ịtụnanya. N'onwe ya, ọ bụ ihe magburu onwe ya inye ihe na-adọrọ mmasị na ya juputara n'obere nooks na crannies. Nke a craft e mere na nzube nke inye ozi, na nke a ụbọchị ka Ụbọchị Valentine, na izobe obere nkọwa site na ihe ijuanya. Ọ ga-enwe ọdịdị igbe nke a ga-egosipụta na ya igbe abụọ na obere ozi. Iji mee ya nzọụkwụ site nzọụkwụ ị nwere ngosi video ka ị ghara uche ọ bụla nkọwa.
1 Ihe m ji mee igbe ahụ:
8 Nzọụkwụ nke asaa:
9 Nzọụkwụ nke asatọ:
Ihe m ji mee igbe ahụ:
Nnukwu kaadiboodu ojii, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịhọrọ agba ọ bụla.
Akara ọcha ma ọ bụ agba.
Akwụkwọ ọcha ma ọ bụ kaadiboodu.
Agba iji see na dee ozi.
Dị iche iche obere udi anwụ cutters.
Ụfọdụ kaadị na-acha uhie uhie ma ọ bụ na-egbuke egbuke iji mee ụdị ma chọọ igbe ahụ mma.
Na kaadiboodu anyị na-ahọrọ, anyị na-adọta nnukwu square nke 24 x 24 cm. N'ime ya anyị na-ese Ogha 9 zuru oke nke 8 x8 cm.
Anyị na-ebipụ square ọcha na kaadị ọcha ma ọ bụ akwụkwọ ọcha. Ọ ga-enwerịrị oke erughị 8 x 8 cm iji banye n'ime igbe ahụ. Oghere na-acha ọcha ga-eje ozi dị ka template iji mee ka onye ọzọ nke otu nha ma bepụ foto nke otu akụkụ. n'ogige ọcha anyị ga-esere ụfọdụ obere nkọwa dị ka ọmarịcha foto ma ọ bụ ozi.
Anyị kwesịrị mee igbe 5. Iji mee otu n'ime ha ka anyị na-ese akụkụ nke 16 x 16 cm. Anyị ga-esetịpụ ọtụtụ ahịrị n'ime: ọ ga-abụ square 8 x 8 cm n'etiti, gburugburu a ga-enwe akụkụ nke 4 cm. Mgbe ị na-ese ahịrị, anyị na-ahụ na e meela ụfọdụ square n'akụkụ nke ọ bụla. Anyị na-egbutu isi naanị otu akụkụ nke ahịrị ahụ kpụrụ site na nkuku square. Mgbe ị na-egbutu ya, ọ ga-arụ ọrụ dị ka flaps iji chịkọta ọnụ ma si otú ahụ mepụta igbe ahụ.
Ga igbe 4 ndị ọzọ Ewezuga nke anyị mere naanị, ma otu n'ime ha ga-enwe ihe dịka 3 ma ọ bụ 4 mm ọzọ n'akụkụ nke ọ bụla, n'ihi na ọ ga-abụ obere igbe ma ọ bụ mkpuchi nke ikpeazụ ikpeazụ anyị ga-arụ ọrụ dị ka isi igbe. Anyị na-ehulata nsọtụ nke akụkụ nkuku na anyị na-ejikọta flaps na-akpụ igbe ahụ
Site na ihe owuwu anyị mere na mbido (24 x 24 cm) anyị na-egbutu oghere nke dị na nkuku. Anyị na-nhazi na anyị na-atụgharị ahịrị niile nke e sere
N'ime flaps abụọ na-adịghị n'ahịrị, anyị na-etinye silicone na mado na nke ọ bụla square igbe. Na Central square anyị na-etinye foto ahụ na n'akụkụ abụọ nke ọzọ fọdụrụ anyị na-etinye acha ọcha n'ámá na anyị ji ozi dọtara. Anyị ga-arapara ya na osisi gluu ka akwụkwọ ahụ ghara ịhịa aka n'ahụ.
Nzọụkwụ nke asaa:
Anyị na-agbanye bọọlụ porexpan na igbe ọ bụla anyị ga-etinye nkọwa nke anyị chọrọ inyefe.
Nzọụkwụ nke asatọ:
Site na obere igbe abụọ anyị nwere, anyị na-emechi igbe porexpan dị ka mkpuchi. Anyị na-emechi dum na na mkpuchi ma ọ bụ igbe kachasị ukwuu anyị na-emechi ma ọ bụ kpuchie usoro dum. Na ọtụtụ igwe ọkpọ ọkpọ anyị ga-eme ụdị dị iche iche ma chọọ igbe dị n'èzí mma. Anyị ga-mado ọnụ ọgụgụ na anyị ga-enwe anyị igbe njikere!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts na ihe » Ọrụ katọn » Igbe ịtụnanya maka ụbọchị Valentine
ihe ndozi maka valentine
Okpu pompom dị mfe iji chọọ mma